J: Need HELP! SOS - သင့်ကို အလိုရှိသည်။
Need HELP! SOS - သင့်ကို အလိုရှိသည်။
ကိုကျော်သူတို့ရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းဟာ ဂျူလိုင်၂၀၀၉ ရောက်ရင် ယခုလက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ကနေ ဖယ်ပေးရတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရုံးခန်းထားဖို့ အတွက် အဖွဲ့ ပိုင် မြေတကွက် ဒဂုံမှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ နာရေးကူညီမှုပိုင် မြေနေရာမှာ ကားထားဖို့၊ ရုံးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့၊ အသင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု တွေကို ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် အဆောက်အဦး ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။
အဖွဲ့ ၏စည်းကမ်းချက်များအရ နာရေးကူညီမှုအတွက်သာ အသင်းပိုင်ငွေ(နာရေးကူညီဖို့ ဆိုပြီးလှုထားတဲ့ငွေ) ကို လုံလောက်အောင် သုံးစွဲ နိုင်ပါတယ်။ သို့ သော်လည်း လက်ရှိအသင်းမှာ ရှိတဲ့ငွေဟာ ရုံးအသုံးစရိတ်၊ အသင်းပိုင်အဆောက်အဦ၊ ကား စတာတွေကို ဆောက်လုပ်ဖို့၊ ၀ယ်ဖိုို့ကို သုံးခွင့်မရှိပါဘူး။
ထို့ ကြောင့် အသင်းရဲ့ အထွေထွေရုံးသုံးစရိတ်အတွက် သီးသန့်အလှုငွေလိုနေပါတယ်။ အဆင်မပြေရင် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း ကို ပိတ်ရကိန်း ရှိနေပါတယ်။ အခမဲ့ဆေးခန်းပိတ်လိုက်ခဲ့ရင် ဆင်းရဲသား၊ အခြေခံ လူတန်းစား အများစု အတွက် နစ်နာမှုတွေ အခက်ခဲတွေ အများကြီးတွေ့ ကြုံလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ စာဖတ်သူနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေ အနေနဲ့တတပ်တအားမှ ကူညီပေးစေလိုပါတယ်။
နာရေးကူညီမှု အသင်း နဲ့ဆက်သွယ် လျှူဒါန်းပေးကြပါ။
နီးစပ်ရာ လှုဒါန်း ကူညီလိုသူ တွေကို ပြောပြပေးကြပါ။ ဒီသတင်းလေးကို ဖြန့်ဝေပေးကြပါ။
သေကွဲကွဲခြင်းရဲ့ပူလောင်မှုဒဏ်တွေ အခက်ခဲဖြစ်နေကြသူတွေ ကို တတ်နိုင်သမျှ စာနာကူညီပေးနေသူတွေကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြပါလို့မေတာရပ်ခံလိုပါတယ်။
Regarding about how to donate to FFSS organization, .... if you are abroad, please refer to as follow:
(A) To direct deposit your donation to the FFSS bank account:
- Deposit donation to:
Acct # : 8504452510
- Send an email to ffss.ygn@gmail.com to inform us about your donation (with your contact information)
- A donation receipt from FFSS will be mailed to you.
(B) To mailadonation check or donation to FFSS from within the US:
- Make check payable to:
Philip Htoon (add note: FFSS donation)
To becomeavolunteer at Thukha Clinic, please feel free to contact or visit our office to pickupaform and submit it to becomeavolunteer at Thukha Clinic.
The FFSS (Yangon) Headquarters
Brahanavihara Pariyatti Sathindaik
Thudatthana Street 16/ Ward(2)
Ph: +95-1-560333 , +95-1-578184
FFSS Executive Committee
With Saydana, Wathana, Akyinna and Annitna
လမင်းခင်ဆီအလည်သွားရင်းနဲ့ တွေ့ ရတာလေးပါ။ ဒါ့ကြောင့် ထပ်မံတင်ပြ လိုက် ပါတယ်။
Crime - မင်းဘယ်ပြေးမလဲ
Foods - Cerebrity နံမည်ကြီးချင်သလား cereal နံက်စြာ...
Animal - (Cat အတောင်ပံနဲ့ ကြောင်) နိုင်ဂျံကား လာချ...
Not sO Funny - Titanic သို့ မဟုတ် တိုက်တယ်ရှင့်
မာရေးသျှင် နှင့် ဘော်တကာတို့ 
True story - Eye Test မျက်စိကောင်းသလား
Funny - Landlord အိမ်ရှင် - ဟေ့ င့ါအိမ်လခ ပေး
News - Burglar အထူးဆပ်ကပ် ကြည့်ချင်သလား
News - သင့်ကားအတွက် စိတ်ချရသော ကားအစောင့် ငှားမည်။...
Funny (Animal) - အုန်းသီးပစ်ချန်ပီယံ သို့ မဟုတ် အိ...
Poem - Candle ဖယောင်းတိုင်
Poem - မပုကြွယ်ရဲ့ ခရုငယ်
Technology - ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုသူ များအတွက် လက်ဆောင် ...
Fashion - ယောက်ျားဘသား
Anniversary - 8888
Funny - Break Dance လာလေ လာစမ်းပါ ငှဲ .. . ငှဲ ....
Funny - Animal ငတက်ပြား ၀င်စားလေရော့လား